Nhoroondo mabhuku anoenderana nezvakaitika zvechokwadi: ziva mamwe acho | Zvazvino Zvinyorwa
Kana tichiverenga bhuku, tinoziva kuti tinogona kuwana kuwanda kwenyaya dzemhando. Vamwe vanozivikanwa kupfuura vamwe. Semuenzaniso, fungidziro inopfuura isinganetsi mukutengesa mabhuku. Asi mukati memhando dzese, pane imwe inomira yakanyanya kuwanda: iyo mabhuku enhoroondo akavakirwa pazviitiko chaizvo.
Kunyangwe vanyori vazhinji vachizvibvumira vamene "marezinesi" ekuti nyaya yacho ishande nemazvo uye kuti zvese zvifanane, chokwadi ndechekuti mabhuku enhoroondo, akavakirwa pane zvakaitika kare, kune akawanda. Chokwadi vamwe venyu munotoziva nezvazvo.
1 Mabhuku chaiwo enhoroondo: iyo yakachena nhoroondo
1.1 Nhoroondo Mabhuku: Chirevo cheMaguta maviri
1.2 Hondo nerunyararo
1.3 Nhoroondo mabhuku: Dare raCharles IV
1.4 Rwendo kusvika kumagumo ehusiku
1.5 Nhoroondo Mabhuku: Mutsara weMoto
1.6 Ndinoreurura makore makumi mana nemashanu ekushora
1.7 Nhoroondo Mabhuku: Iyo Mutengesi Chiratidzo
1.8 Iyo Nherera Chitima
1.9 Nhoroondo mabhuku: Ini, Claudio
1.10 Kune avo Bhero Rinobhadhara
1.11 Nhoroondo mabhuku: Zita reruva
Mabhuku chaiwo enhoroondo: iyo yakachena nhoroondo
Mabhuku chaiwo enhoroondo haasi kufinha, zvitende kana kwete. Muchokwadi, mumakoreji nemasangano vanowanzo tumira iwo mabhuku. Asi kune vamwe zvakare vanoudzwa nenzira yenoverengeka iri mabhuku enhoroondo asi akavakirwa pazviitiko chaizvo.
Pano tinokusiya iwe imwe kusarudzwa kwemabhuku anoenderana nezvakaitika kare.
Nhoroondo Mabhuku: Chirevo cheMaguta maviri
Nhoroondo yemaguta maviri ...
Iri bhuku nderimwe rayo rinotaura zviitiko chaizvo zvakaitika. Mariri, unogona sangana nemwanasikana wechiremba, akasungwa kwemakore gumi nemasere muBastille. Uye zvakare, mamiriro acho ezvinhu, achirondedzera zvakaitika panguva yeFrance Revolution, uye mamiriro eLondon neParis anomiririrwa zvakanaka uye, kunyangwe paine mamwe marezinesi kubva kumunyori, chokwadi ndechekuti akanamira kunhoroondo chaiko.
Uye ndiani munyori? Zvakanaka, zvitende kana kwete, uyu ndiCharles Dickens.
Hondo nerunyararo (nyaya ne ...
Imwe yemabhuku enhoroondo akavakirwa pazviitiko chaizvo zvakaitika ndeiyi, Hondo nerunyararo, zano rinotiisa munhoroondo pakaedza Napoleon kupinda muRussia.
Nekudaro, munyori, Tolstoy, aisada kungotaura chokwadi, asi aisanganisira nyaya yerudo apo tsika yaivepo panguva iyoyo inoratidzwa, uye kuti mhuri dzinoenderana sei nemamiriro matsva.
Nhoroondo mabhuku: Dare raCharles IV
Dare raCharles IV: ...
Tichifunga zvakanyanya nezvenhoroondo yeSpain, isingazivikanwe nhasi nevazhinji, isu tine bhuku rakanyorwa naBenito Pérez Galdós iro rinorondedzera chimwe chezvikamu zvinomiririra zvehumambo hweSpain. Tinotaura nezvazvo Ferdinand VI akarangana sei kubvisa baba vake pachigaro.
Kana iwe uchida kuziva nhoroondo yeSpain, saka bhuku iri rinofanira kunge riri pasi pebhandi rako.
Rwendo kusvika kumagumo ehusiku
Rwendo kusvika kumagumo ehusiku ...
Rakanyorwa naLouis-Ferdinand Céline, bhuku iri rinokuisa muHondo Yenyika Yekutanga uye, mumunhu wekutanga, uine hunhu hwaFerdinand Bardamu, uchasangana. chiitiko icho chakachinja hupenyu hwevakawanda chakagarika sei.
Zvinofanira kutaurwa kuti zvinotyisa, uye kuti zvese zvakaitika zvakanyanyisa, asi pakupera kwezuva ndizvo zvakaitika, saka unenge uchitarisana nerimwe remabhuku enhoroondo anotaurira ndima kubva munhoroondo yezvazviri nyika.
Nhoroondo Mabhuku: Mutsara weMoto
Iyi nhoroondo naArturo Pérez-Reverte yakavakirwa pane imwe yeiyo Hondo dzakaomarara uye dzakanyanya kuitika muSpanish Civil War. Ehe, tinodzoka kuzotarisa kuSpain kuti tidzidze nezveimwe yezvikamu zvave zvichionekwa munyika.
Mune ino kesi, rangano rinotarisa kune mamwe mauto uye izvo zvavanofanira kupfuura nekuti vakanyoreswa kurwa pamberi pehondo. Nekudaro, kutya kwavakaona, kutambura kwavo, kutya, kutya vachamirirwa mubhuku iri, zvichibva pazvinhu chaizvo zvakaitika.
Ndinoreurura makore makumi mana nemashanu ekushora
Ndinoreurura: makore makumi mana nemashanu e ...
Mhumhi yaive kuSpain yakakosha musori munhoroondo yenyika. Uye kuziva kuti akararama sei achipindirwa, achiisa hupenyu hwake munjodzi uye kuti akafambira mberi sei mukati memakore makumi mana neshanu aakashanda asori, kutaura zvishoma, ngano inoshamisa.
Mubhuku rino iwe uchaziva, kwete yakawanda nguva yenhoroondo, asi nhoroondo yezvakaitika yakanangana nemunhu chaiye, uko kuburikidza neyekuyeuka kwake iye achakuudza zvakavanzika uye nyaya dzinozoita kuti bvudzi rako rimire.
Nhoroondo Mabhuku: Iyo Mutengesi Chiratidzo
Chiratidzo chemutengesi ...
Yakanyorwa naJuan Gómez-Jurado, munyori uyu akagona kuongorora chimwe chezviitiko zvakaitika zvakaitika kuSpain uye zvisingazivikanwe nevanhu vazhinji. Kuti aite izvi, anotiisa muma40s apo imwe ngarava inowana kumwe kutsauka uye vakasarudza kuibatsira. Ikoko vanosangana neboka revaGerman avo, mukutenda, vanopa kaputeni mamwe mabwe anokosha uye chiratidzo chegoridhe.
Uye saka nyaya inotanga nehunhu hwemurume aigara pakati peHondo Yenyika I neHondo Yenyika II, uye ndiani anoedza kutsvaga zvakaitika kuna baba vake.
Iyo Nherera Chitima
The Orphan Train ...
Pakati pa1854 na1929 padhuze 250000 nherera vana vakatorwa kubva kuNew York kuenda kuUS Midwest. Saka inotanga nyaya zvichibva pazviitiko chaizvo zvakaitika mubhuku iri, rakanyorwa naChristina Baker Klein, uyo, aine mazwi evakadzi vaviri vanotora nzvimbo yepakati, anotaurira zvakaitika kuvana avo vakanyangarika kubva pasi.
Icho chikamu chenhoroondo yeUnited States isingazivikanwe zvakanyanya, uye izvi zvinoratidza kuti panguva iyoyo kutengeswa kwevana kwaive chinhu chakajairika, sezvo vaishandiswa sevashandi vebasa rakaoma uye kuti varume vaisada kuita .
Nhoroondo mabhuku: Ini, Claudio
Ini, Claudio (13/20)
Iri bhuku, rinotidzosera kuhushe hweRoma, rakavakirwa pachimiro chinozivikanwa, Claudio, wedzinza raJulius Caesar pamwe naAugustus, Caligula naTiberius. Claudio ndiye akatonga kubva 41 kusvika 54, Roma payakakunda matunhu mazhinji.
Asi iwe chausingazive ndechekuti Claudio aive akaremara uye achidzedzereka, kuti aive nematambudziko mazhinji uye kutya, kuti paive nezvinhu zvakawanda kubva paudiki hwake zvakamuratidzira zvakaoma mukukura kwake.
Nekudaro, iro bhuku rinokupa fungidziro seyechokwadi sezvinobvira kumufananidzo uyu uye nemararamiro avakaita panguva iyoyo.
Kune avo ...
Zvakare zvichibva pa zvikamu zveSpanish Civil War, munyori, Ernest Hemingway, aive mutori wenhau kuhondo kuSpain, anorondedzera chitsauko chehondo iyoyo, kunyanya iya inozivikanwa seSegovia Inogumbura.
Munguva iyoyo, divi reRepublican rakaedza kudzivirira vapanduki kuti vasapfuure, asi hazvo, zvaisave nyore sekufunga.
Nhoroondo mabhuku: Zita reruva
Ehe hongu, ino nhoroondo inoenderana nezviitiko zvakaitika. Kunyanya, yaive yakavakirwa pane chinyorwa chekare chezana ramakore rechiXNUMX icho, chakawanikwa muAustria, chakarondedzera kuti dzakatevedzana sei mhosva dzisinganzwisisike paMonk Monastery, imwe yeakakurumbira pasirese.
Nekudaro, munyori weruzivo, Umberto Eco, akagadzira nyaya yake zvichibva pane zvakaitika munzvimbo iyoyo panguva iyoyo uye nekuferefetwa kwakaitwa uye mhosva yemhondi yakaratidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Nhoroondo mabhuku anoenderana nezvakaitika zvechokwadi
Cristina Valencia Salazar akadaro
Ndakaona ongororo dzebhuku rega rega dzichishamisa, pinda saiti ino nekuti zita racho rakabata pfungwa dzangu, asi pandakaverenga kuti chikamu ichi chaive chakanangana nezviitiko chaizvo, zvakaita kuti ndide kuverenga zvakawanda uye nyaya yega yega yaitaridza kunakidza nekuti ndakanga ndisati ndambonzwa yezviitiko izvozvo.
Pindura kuna Cristina Valencia Salazar